ကိုကို့သဘော – My Blog
သူမနာမညျက ‘စနျးစနျးခငျ’အသကျ ၁၉ ကြျောလို့ ၂၀ ပွညျ့တော့မယျ တောသူဆိုတော့ လုံးကွီးပေါကျလှပေါခါးသေးရငျခြီဖငျလုံးကွီးကွီး…နို့အုံထှားထှားပေါ့…ရှာကာလသားတှအေကွိုကျပေါ့ အမတေဈခုသမီးတဈခု..သူကတော့ ဘယျကာလသားမှစိတျမဝငျစားဘူးသူသိတာက ‘စနေ’သူနာမညျကတော့ ‘စနေ’ လို့ချေါပါတယျ မိသားစုတော့မရှိတော့ဘူး အသကျ ၂၅ ငယျငယျထဲကမိဘတှဆေုံးပါးသှားပွီ စနဆေိုရငျတဈရှာလုံးကကွောကျတယျသူကမဟုတျမခံလေ.. သူဟာသူတဈယောကျထဲနတေယျ ဘယျသူနဲ့မှမရောဘူး သူကိုစောကျပွဿနာလာရှာရငျတော့ အဲ့ကောငျဘဝကိုတော့မတှေးဝနျ့စရာ သူကရှာအကွီးအကဲသူကွီးကိုတောငျ သိပျဂရုမစိုကျဘူး သူကွီးကလဲသူကိုသိပျမဟုတျပဲနဲ့မစှတျဆှဲဘူးပေါ့ သူကွီးပါရှိနျရတဲ့သူ သူအလုပျကတောတကျအမဲလိုကျတဲ့မုတျဆိုးလေးပေါ့…“ကိုမဲကွီးထနျရညျတဈမွူခဗြာ”
”ဟ..စနပေါလားကှ..မငျးဒီနတေ့ောမလယျဘူးလား””အခုမှ တောကပွနျထှကျလာတာကိုမဲကွီးရေ””စကားမမြားနဲ့ဗြာထနျးတဈမွူသာအရငျခပြေး””အေးအေး..အေးပါစနရော.. အမွီးရောဘာစားမလဲ..””ငရံခွောကျဖုတျရှိရငျခဗြာ”ခဏနတေော့ မဲကွီး ထနျးတဈမွူနဲ့ငရံခွောကျပနျးကနျလာခပြေးတယျ… “ကိုမဲကွီးခဏ.””ဘာလဲကှစနရေ..ဘာလိုသေးလို့လဲ””ဘာမှမလိုဘူး ကြုပျမှာပိုကျဆံမပါဘူး””ဟေ..””ဘာမှမဟနေဲ့ ရော့ဒီ ဆကျသား တဈတှဲ””ထရညျဖိုးနဲ့အမွီးအထှကျ ဒီဆကျတဈတှဲယူလိုကျ”ပွောပွီး စနတေဈယောကျ သူလှယျလာတဲ့နှီးပလိုငျးထဲကဆကျတဈတှဲထုတျပေးလိုကျတယျ”အျောအဆငျပွတောပေါ့ကှာစနကေလဲ မငျးအရငျလဲဒီအတိုငျးလဲသောကျနကွေပဲ မငျးထရညျလိုရငျပွော ငါနောကျတဈမွူ ခပြေးမယျ” စနလေဲထရညျနှဈမွူလောကျသောကျပွီးပွနျမယျအလုပျ..” ဟ..စနပွေနျတော့မှာလား””ခဗြားဘာလုပျမို့လဲ””မငျးကိုပွောစာရှိလို့ ဒျေါမိစိနျမကိုမငျးသိတယျမလား”“သိတယျလအေဲ့တာဘာဖွဈလဲ”စနလေသေံမာမာနဲ့ပွောလိုကျတော့မဲကွီးလဲ လရှေညျနလေို့မဖွဈတော့ဘူးဆိုတာသိလိုကျတယျ..”
ဟို..ဟို.ဘာမှမဖွဈပါဘူးကှာ.. မိစိနျမတို့ယာတောဝိုငျးနောကျကို ယုနျတှစေားကကျြ ဆငျးလာတယျတဲ့” “ဟ..ခဗြားစောကျပိုမပွောနဲ့ ကြုပျကမုတျဆိုးပါ ဒျေါစိနျမတို့ဝိုငျးနောကျမှာ ဘယျယုနျစားကကျြမှမရှိဘူး””ငါမငျးကိုမလိမျဝနျ့ပါဘူးကှာ ဟိုတလောကမှ ယုနျစားကကျြဆငျးလာတာကှ” ”ငါ့ကို မိစိနျမ သမီး စနျးစနျးခငျ လာပွောတာကှ””ငါ့ကိုယုနျထောကျခြောကျလုပျတကျလားတဲ့ ငါလဲမလုပျတကျဘူးဆိုတော့အဲ့တာကိုကွီးစနလောရငျပွောလိုကျပါတဲ့ယုနျစားကကျြရှိတဲ့အကွောငျးကိုရရငျတော့ သူတို့ကိုလဲဟငျးစားနဲနဲလောကျပေးခဲ့ပေါ့တဲ့” “အေးပွီးရောဗြာကြုပျအခုအဲ့ဘကျကလှဲ့ပွနျမယျ ”ပွောပွီးစနလေဲ့လှဲ့ထှကျသှားတယျ မဲကွီးတဈယောကျစနနေောကျကြောကိုကွညျ့ပွီး” ဟူးဒီကောငျနဲ့စကားပွောရတာလဲ မွို့ပိုငျမငျးနဲ့စကားပွောရတာထကျကိုပိုဆိုးတယျ”ဟဲ့ စနျးစနျး””ရှနျ..အမေ””သမီးသောကျရလေေးသှားခကျပွီး ယာထဲကဇှနျးနဲနဲခူးခဲ့ပါကှယျ…
ညနစေ့ာအတှကျဟငျးခကျြရအောငျ””ဟုတျအမေ သမီးအခုပဲသှားလိုကျပါမယျ”ပွောလဲပွောစနျးစနျးခငျလဲသောကျရပေုံးဆှဲပွီးယာထဲဆငျးပေါ့… စနျးစနျးခငျတို့ယာအနောကျမှာက ပဲခငျးကဇှနျးနဲ့မုနျလာခငျးနဲ့သီးပငျစားပငျတှအေစုံရှိတယျ အနားမှာလဲ ရကေနျငယျလေးတဈကနျရှိတော့ သူတို့သားမိတှအေဆငျပွတောပေါ့ သူတို့သားမိနှဈယောကျပဲရှိတယျမနှဈကမှဖခငျကွီးပိုးထိလို့ဆုံးသှားတော့သီးပငျစားပငျသီးခြိနျပှငျ့ခြိနျရောကျပွီဆို သားမိနှဈယောကျယာထဲဆငျးနရေတာပေါ့ ရှာထဲမှာတော့အိမျတဈလုံးရှိပါတယျ. .“အငျး..ဒီအတိုငျးဆိုသခြောနပွေီ.. ဒီယာတောကိုယုနျတှစေားကကျြကွနပွေီပဲ”စနတေဈယောကျ အနအေထားကွညျပွီးထောငျခွောကျတှဆေငျနလေရေဲ့…”အငျးရတေော့ခပျပွီးပွီ …ရပေုံးကိုဒီမှာထားခဲ့ရမယျကဇှနျးခူးပွီးမှာအပွနျဝငျသယျရမယျ” စနျးစနျးခငျတဈယောကျကဇှနျးခငျးထဲကိုထှကျလာခဲ့တယျကဇှနျးခူးနရေငျးနဲ့” အားအပေါ့သှားခငျြလိုကျတာ”စနျးစနျးခငျလဲကဇှနျးခငျးနဲ့လှတျတဲ့တောစပျနားသှားပွီး အပေါ့အပါးသှားတာပေါ့ “ခြှပျ..ခြှပျ””ဟော..အသံကွားတယျ”စနတေဈယောကျလဲ အနီးရှိခွုံစပျမှာဝငျပုနျးလိုကျတယျ သူအထငျယုနျတှဆေငျးလာပွီပေါ့…အသံလာရကွညျ့လိုကျတော့စနျးစနျးမ ဖွဈနတေယျ
စနလေဲခွုံစပျကထှကျမယျအလုပျ”ဟာ..”စနမေကျြလုံးပွူးသှားတယျ ထရညျသောကျပွီးရီဝဝေဖွေဈနတောပါပွသှေားတယျ…စနျးစနျးတဈယောကျဘယျသူမှမရှိဘူးဆိုပွီး ထမိနျအသာမပွီး သေးထိုငျပေါကျပွီပေါ့..”ရှဲ..ရှဲ..”စနကွေညျ့နရေငျအာခေါငျတှခွေောကျလာတယျ စနျးစနျးခငျစောကျဖုတျကပနျးရောငျသနျးပွီအမှေးလေးတှနေဲ့စောကျဖုတျကွားကထှကျလာတဲ့သေးကလဲ မိုးရှာလိုရဇေလောကျကကွလာတဲ့ရလေားမှတျရတယျ…စနလေဲပုထုဇဉျလူသားပဲ ကွညျ့နရေငျးက အောကျကငယျပါကထောငျလာတယျ.. စနျးစနျးခငျလဲအပေါ့အပါးသှားပွီးပွနျသှားတယျ.. စနတေဈယောကျကတော့နရောမှာပငျမှငျသကျပွီးကနျြခဲ့တယျ…စနလေဲခဏနတေော့ထောငျခြောကျတှဆေငျပွီးပွနျထှကျလာတယျ…စနျးစနျးခငျလဲ ကဇှနျးလိုသလောကျခူးပွီးပွနျမယျအလုပျ”ဟငျကိုကွီးစနပေါလား..ကိုကွီးစနဘေယျကရောကျလာတာလဲ..” ”အေး..ငါ.ငါ..ဟိုနငျတို့ယာတောမှာယုနျဆငျးတယျဆိုလို့ ထောငျခွောကျလာဆငျတာ…””ဒါနဲ့နငျကရောမပွနျသေးဘူးလား..””ရှနျ…ကဇှနျးခူးနတော အခုပွနျမလို့”စနျးစနျးတဈယောကျဇဝဇေဝါဖွဈသှားတယျ…
“ဘာလို့မပွနျသေးဘူးလားမေးတာလဲစနျးစနျးရောကျနတောကိုကွီးစနသေိတယျပေါ့””ဟို..ဟို မသိပါဘူး..ငါ.ဒီအတိုငျးမေးကွညျ့တာ””ကိုကွီးစနယေုနျထောကျခြောကျဆငျနတော ဘယျအခြိနျထဲကလဲ””တျောတျောကွာပွီဟ”ဟာသှားပွီဒီပါးစပျကလဲလှတျကနဲထှကျသှားတယျ”ရှနျ.အဲ့..အဲ့…ဒါဆိုစောစောကစနျးစနျးအပေါ့သှားတုနျးကကိုကွီးစနအေဲ့နားမှာရှိတယျပေါ့.. ဘာလို့စနျးစနျးလာတာကိုကိုကွီးရှိတာမပွောလဲ”…. ”ငါလဲအသံကွားတော့ယုနျတှဆေငျးလာတယျထငျလို့..ခွုံခိုပုနျးလိုကျတာပါ…” “ပွီးမှနငျမှနျးသိတော့ငါပွနျထှကျမလို့ပဲ..ဟို..ဟို..နငျကအပေါ့တောငျသှားနပွေီ” စနျးစနျးတဈယောကျမကျြနာတှနေီနပွေီငါမှားတာပါ.. ဘယျသူမှမရှိဘူးအထငျနဲ့ လှတျလှတျလပျလပျအပေါ့သှားလိုကျတာဆီးကလဲတော့တော့အောငျ့နတော.. ဒါ..ဒါဆိုကိုကွီးစနငေါ့ဟိုဟာကိုမွငျသှားပွီးပေါ့..တှေးနရေငျးနဲ့ပဲစနျးစနျးပိပိလေးကကငျြကနဲ့ဖွဈသှားတယျ… ”အောငျမလေး..ရှကျလိုကျတာ”ပွောပွီးစနျးစနျးမကျြနှာကိုလကျနဲ့အုပျပွီးလှဲ့အထှကျ ခွခေေါကျပွီလဲမလို့ဖွဈသှားတယျ..
“အ..””ဟာ..စနျးစနျး””ဟယျ…”စနလေဲစနျးစနျးလဲမလို့ဖွဈတော့လှမျးဖမျးပွီထိနျးလိုကျတာပေါ့ နှဈယောကျလုံးမွပေျေါလဲကွသှားတယျစနကေအောကျကစနျးစနျးကစနအေပျေါကပေါ့ …နှဈယောကျသားတဈယောကျကိုတဈယောကျငေးကွညျ့နကွေတယျ…ကြှနျမရငျတှခေုနျလိုကျဘယျလိုဖွဈနပေါလေ့..”အို… ”စနစေနျးစနျးကိုဆှဲလှဲ့ပွီးအပျေါကိုတကျလိုကျတယျပွီးတော့ စနျးစနျးရဲ့ပါးတှနေမျးနှတျခမျးကိုအတငျးဖိနမျးတာပေါ့..” ဟှနျးအှနျ့..အှနျ့…”စနျးစနျးအောကျနခေေါငျးတှခေါရမျးနတေယျ… “စနျးစနျးငါစိတျတှထေိမျးမရတော့ဘူးဟာငါ..ငါ့ကိုခှငျ့လှတျဟာ..”ဟုတျပါတယျကြုပျစိတျတှထေိမျးမရတော့ဘူး လဲကွသှားပွီးသူကြုပျအပျေါရောကျသှားထဲက ကြုပျမနနေိုငျတော့ဘူးလီးကလဲတျောတျောတောငျနပွေီ စနျးစနျးသေးပေါကျတုနျးကလဲကြုပျမွငျခဲ့တာ အခုကြုပျအပျေါကိုရောကျနပွေီ ကြုပျစိတျတှဘေယျထိနျးနိုငျတော့မှာလဲ… ကြှနျမလဘေယျလိုဖွဈနမှေနျးမသိဘူး ကိုကွီးစနကေိုလဲကြှနျမစိတျထဲမှာစိတျဝငျစားနတောကွာပါပွီ ကိုကွီးစနကေ အေးတိအေးစပျကွီးနဲ့မိနျးမတှနေဲ့သိပျအရောဝငျတာမဟုတျဘူး အခုကြှနျမကိုနမျးနတောတှေ ကြှနျမဘယျနနေိုငျမှာလဲကြှနျမလဲယောကျြားတဈယောကျအထိတှဒေါပထမဦးဆုံးပဲလေ…”
ဟငျး…အ..အိုး…မလုပျပါနဲ့ကိုကွီးစနရေယျ”ကြှနျမစဉျးစားနတေုနျးမှာပဲ ကိုကွီးစနကြှေနျမနို့တှကေိုငျနပွေီလေ..“စနျးစနျး ငါနငျကိုခဈြတယျဟာ””ရှနျ…တကယျခဈြတာရောဟုတျရဲ့လားကိုကွီးစနရေယျ””တကယျပါစနျးစနျးရယျ” စနျးစနျးရဲနို့တှကေိုသူပွနျညှဈနပွေီ”အှနျ..ပွှတျပွှတျ…”နှတျခမျးတှကေိုလဲအတငျးစုတျပေါ့…အိုး..သူလီးကွီးက ကြှနျမစောကျဖုတျလေးကိုထောကျမိနပွေီရှငျ့ ကြှနျမဘယျလိုနနေိုငျမှာလဲစနလေဲလီးနဲ့စနျးစနျးရဲ့စောကျဖုတျကိုထောကျပွီး အပျေါကနတေတေ့ပွေီ့းထိုးနလေရေဲ့.. လကျတှကေလဲအညိမျမနဘေူး. .နို့တှညှေဈလိုကျအောကျကိုအတငျထိုးပွီးဖငျတှကေိုညှဈလိုကျပေါ့ စနျးစနျးတဈယောကျအောကျကနကေ့ော့ပွနျနပေါပွီ…စနစေနျးစနျးရဲ့အင်ျကြီလေးကိုခြှတျခလြိုကျပါပွီ ပွီးတော့စနျးစနျးရဲ့စီမီးဘျောလီအင်ျကြီလေးကိုခြှတျအပွီး…ဟာလှလိုကျတာ စနျးစနျးရဲ့နို့အုနျကွီးကိုမွငျပွီ စနေ မနနေိုငျတော့ဘူးအတငျးကုနျးစို့တော့တာပေါ့…”အို…ကိုကွီးစနအေ့ား..အီး..” စနျးစနျးဖီးတှစှေတျတကျနပေါပွီ စနရေဲ့ခေါငျးတှကေိုအတငျးပွနျပွီးသိုငျးဖကျထားပါတော့တယျ… စနခေေါငျးပွနျမော့လာပွီး စနျးစနျးရဲ့နှတျခမျးကိုတဈခကျြလှမျးစုတျလိုကျတယျစနျးစနျးလဲအလိုကျသငျ့ပွနျစုတျပေးတာပေါ့ …နှတျခမျးစုတျနရောကစနပွေနျခှာလိုကျတယျ
စနျးစနျးကစနကေိုမကျြလုံးလကေလယျကလယျနဲ့ပွနျကွညျ့နတောပေါ့…စနကေသူအင်ျကြီတှခြှေတျလိုကျပါတယျ..ပွီးတော့သူဘောငျဘီတှခြှေတျမယျလုပျတော့…စနျးစနျးကစနရေဲ့လကျကိုလှနျးကိုငျပွီး”ကိုကွီးစနျးစနျးကိုတကယျရောခဈြရဲ့လား””စနျးစနျးက အကို့ကိုယျမယုံလို့လား.. ကိုယျ.. စနျးစနျးကိုတကယျခဈြမိသှားတာပါ”ပွောပွီးစနေ စနျးစနျးရဲ့နှတျခမျးတှကေိုပွနျစုတျနို့သီးတှစေို့ပေါ့”အား…ကိုကွီး..စနျးစနျးမနတေကျတော့ဘူး… အ…အ..စနျးစနျးလဲကိုကွီးကိုအရမျးခဈြတယျ..အာ့..”စနလေဲစနျးစနျးရဲ့နိုတှစေို့နရောမှ ထမိနျကိုအသာလေးအောကျကိုခြှတျခတြာပေါ့…စနျးစနျးလဲဖငျလေးကိုအလိုကျသငျ့လေးမွှကျေပေးလိုကျတယျ…စနျးစနျးထမိနျကှငျးလုံးခြှတျကွသှားပါပွီ..စနေ စနျးစနျးရဲ့စောကျဖုတျလေးကိုကွညျ့နရောမှ တသှေးတှမြေိုခလြိုကျရတယျ”ဂလု” “အာ…လှလိုကျတာစနျးစနျးရာ.. စနျးစနျးရဲ့စောကျဖုတျလေးကအရမျးလှတာပဲ” ”အာ..လူကွီးနျောဘာတှပွေောနတောလဲ” စနျးစနျးမှာနှဲ့တဲ့တဲ့အသံလေးနဲ့ပွနျဆိုလိုကျတယျ …ပွောသာပွောရတယျ သူအဲ့လိုပွောတော့စနျးစနျးစောကျဖုတျလေးကငျြကနဲဖွဈပွီး အရလေေးတှတေောငျစိမျ့ထှကျလာတယျ
“အို..ကိုကွီး..အား..ရှီး…အ..အ.” “ဘယျလိုတှလေုပျနတောလဲကိုကွီးရယျ..အား.. ”စနမှောစနျးစနျးရဲ့စောကျဖုတျလေးကိုကုနျးပွီးစုတျနတောပေါ့ စနျးစနျးအောကျကနမေနနေိုငျတော့ဘူးလဖေငျတှဆေိုကော့ပွနျလနျ့ထှကျနပွေီ…”အား…စနျးစနျးကိုသကျနတောလားကိုယျကွီးရယျ…” “ခဈြနတောပါ..စနျးစနျးရဲ့ ကိုကွီးကစနျးစနျးကိုအခဈြတှပေေးနတော” ပွှတျ…ပွှတျ… ရှတျ….စောကျစိလကေိုဆှဲစုတျလိုကျတာပေါ့ရှာလှတျ…”အား…အို….စနျးစနျးမနနေိုငျတော့ဘူးကိုကွီးအား….” ပွှတျ…ပွှတျ….”အာ..အ..အို…ကိုကွီး.အား…”စနျးစနျးပွီးခငျြနပွေီလေ စနခေေါငျးကိုအတငျးဖိကိုငျထားတာပေါ့အ…အား..ငိ…အိုး…ဟငျး…စနျးစနျးပွီးသှားပွီ အိုအရမျးကောငျးလိုကျတာ ဘာနဲ့မှကိုမလဲနိုငျတဲ့ခံစားမှုတဈခုပဲစနျးစနျး ကောငျးလှနျးအားကွီးလို့ မကျြလုံးလေးမှေးပွီးမကျြရညျလေးတှပေါကနြမေိတယျ…
စနလေဲသူဘောငျဘီကိုခြှတျနရေငျးနဲ့.. “ကောငျးလားစနျးစနျး””အငျး…ကိုကွီးကိုစနျးစနျးအရမျးခဈြတယျ” စနျးစနျးပွနျပွောရငျးနဲ့မကျြစိလေးအသာဖှငျ့ကွညျ့တော့ အို့…သူလီးကွီးက အကြောတှထေောငျလို့လီးကွီးကတနျးနတေယျစနျးစနျးကွညျ့ပွီးကကျြသီးတှထေကုနျတယျ…စနကေစနျးစနျးရဲ့နှတျခမျးလေးတှကေိုပွနျစုတျပွီး ပွောတယျ”စနျးစနျးကိုကွီးကိုရော ကောငျးအောငျမလုပျပေးခငျြဘူးလား…” ”စနျးစနျး ဘယျလိုလုပျရမှာလဲ..” “စနျးစနျးကို ကိုကွီးလုပျပေးသလို့ပေါ့ ဒါကွီးကို ဒါလေးနဲ့လေ..”ပွောပွီးစနကေ့သူလီးကိုပွပါတယျပွီးတော့ စနျးစနျးရဲ့ပါးစပျကိုလကျနဲ့ထောကျပွတယျစနျးစနျးသိတာပေါ့ဒါသူစနျးစနျးကိုလီးစုပျခိုငျးတာပဲ.. စနျးစနျးတှဝေသှေားတယျ လီးစုပျရမှာစနျးစနျးတဈခါမှဒါမြိုးမလုပျဖူးဘူး ယောကျြားတဈယောကျနဲ့အတှအေကွုံကလဲဒါပထမဆုံးလေ…
စနျးစနျးအာခေါငျတှခွေောကျကပျလာတယျ..စုပျလဲစုပျကွညျ့ခငျြတယျ စုပျလဲမစုပျရဲဘူး.. “စနျးစနျး…ဘာဖွဈလို့လဲ မလုပျပေးခငျြဘူးလား ဘာလဲကိုကွီးကိုမခဈြလို့လား..””မဟုတျပါဘူးကိုကွီးရယျ ကိုကွီးကိုမခဈြလို့မဟုတျပါဘူး..””အငျး..စနျးစနျးမလုပျပေးခငျြလဲကိုကွီး အတငျးမလုပျခိုငျးပါဘူး… ”ပွောပွီးစနျးစနျးရဲ့နို့တှစေို့လိုကျတယျ လကျကလဲစနျးစနျးရဲစောကျဖုတျကိုနှိုကျပွီး စောကျစိလေးကိုခပြေေးနတောပေါ့ အိုး…စနျးစနျးစောကျပတျကပွနျယားလာပွနျပွီ တဈကိုယျလုံးကကျြသီးတှထေသှားတယျ ကိုကွီးကိုလဲသနားသှားတယျ စနျးစနျးကိုကောငျးအောငျလုပျပေးခဲ့တာပဲ စနျးစနျးလဲကိုကွီးကိုပွနျလုပျပေးသငျ့တာပေါ့ စနျးစနျးဆုံးဖွတျလိုကျပွီ… စနျးစနျး စနရေဲ့ခါးကိုကိုငျပွီးပတျလကျပွနျလှနျလိုကျတယျ ပွီးတော့စနရေဲ့ပေါငျဂှကွားကိုသှားပွီး”စနျးစနျး ကိုကွီးကိုကောငျးအောငျလုပျပေးမယျနျော””စနျးစနျးကခဈြဖို့ကောငျးတယျလိမျလဲလိမျမာသိလား”
”အှနျး..သှားပါအပိုတှေ”စနျးစနျး ကနှဲ့ကလဲ့ရအသံလေးနဲ့ညူညူတူတူပွောလိုကျတယျစနျးစနျး စနရေဲ့လီးကိုကိုငျလိုကျတယျ ပွီးတော့စနျးစနျးပါးစပျလေးအသာဟပွီး စနကေိုလီးစုပျပေးတော့တာပေါ့….“အား…ကောငျးလိုကျတာစနျးစနျးရယျ”ပွှတျပွှတျ.. အား…တျောတျောလေးကွာတော့”တျောတော့စနျးစနျးတျောတော့””ဘာဖွဈလို့လဲကိုကွီး စနျးစနျလုပျပေးတာမကောငျးလို့လား””စနျးစနျးလုပျပေးတာကောငျးပါတယျကိုကွီး စနျးစနျးရဲ့စောကျဖုတျကိုလိုးခငျြလို့””ဟာကိုကွီးကလဲ အဲ့လိုတှမေပွောပါနဲ့””ဘာလို့လဲစနျးစနျးရဲ့” “ရှကျစရာကွီး””ဘယျသူမှမရှိတာ မရှကျပါနဲ့နျော” “သှားမသိဘူး သူကွိုကျသလိုပွော ကွိုကျသလိုလုပျတော့” စနျးစနျးလဲကွာကွာမမူနိုငျပါဘူး
အဲ့လိုတှပွေောလစေနျးစနျးဖီးတှတေကျလပေဲလေ…”စနျးစနျးပတျလကျလှနျ့လိုကျနျော” “အငျး”စနလေဲစနျးစနျးရဲပေါငျးနှဈလုံးကွားဝငျပွီး စနျးစနျးရဲ့စောကျစိကို လီးထိပျနဲ့ထိုးခတြောပေါ့ “အား..ကောငျးလိုကျတာကိုကွီးရယျ” စနျးစနျးဖီးတှပွေနျတကျလာပါပွီ စနကေလဲလီးထိပျနဲ့စောကျစိကိုထိုးခလြေိုကျလကျကလဲနိုးသီးတှကေိုညှဈပွီနယျပေးနတောပေါ့ စနျးစနျးကော့လနျ့လာပါပွီ စနျးစနျးမနနေိုငျတော့ဘူး စနသေိပါတယျ စနျးစနျးခံခငျြလာပွီဆိုတာ”စနျးစနျး ကိုကွီး စနျးစနျးကိုလိုးတော့မယျနျော””အငျး..ဖွေးဖွေးလုပျနျောကိုကွီး””အငျးပါ..စနျးစနျးစိတျတှရှေော့ထား တငျးမထားနဲ့”ပွောပွီးစနသေူလီးကိုအရငျးကနကေိုငျပွီး စနျးစနျးစောကျပတျထဲကို ထိုးစိုကျလိုကျတာပေါ့ “ဗွိ…ဗွှတျ…”
”အား….အာမလေး…အိ..အမေ့””အားနာတယျကိုကွီး””ခဏလောကျအောငျ့ခံပါစနျးစနျးရယျ” စနလေဲလီးကိုကိုငျပွီးစနျးစနျးရဲစောကျပတျထဲကိုသသေခြောခြာထညျ့တာလီးကတဈဝကျကြျောလောကျစနျးစနျးရဲ စောကျပတျထဲကိုဝငျနပွေီ…“အား..အီး…”စနလေဲတဈဝကျလောကျဝငျနတေဲ့အတိုငျးလေးလိုးနတောပေါ့…” အိုး..ကောငျးလိုကျစနျးစနျးရယျ””အား..အိ…အ..”ပွှတျ..ပွှတျ…လိုးရငျးလိုးရငျးနဲ့ လီးကိုဖွညျးဖွညျးခငျြးထညျ့နတောပေါ့…”အား…ကောငျးတယျကိုကွီး”ဗွိ…ဗွဈ…အား…နာတယျစနလေဲလီးကိုတဈဆုံးထိုးထညျ့လိုကျတယျ…
စနျးစနျးရဲ့နှတျခမျးတှစေုပျနို့တှညှေဈပွီးလိုးပေးနတောပေါ့…” အား…ကောငျးလိုကျတာ” ”စနျးစနျးကောငျးလားလိုးလို့ကောငျးလား””အား…ရှီး..ကောငျးတယျကိုကွီး..နဲနဲနာတယျ””စနျးစနျးခံနိုငျလား” ”အငျးရတယျကိုကွီးလိုးလိုးစနျးစနျးအောငျ့ခံပေးမယျ”အား….အှနျ့…အှနျ့…ပှတျ…ပှတျ…ဗွိ..ဗွိ..ပလှတျ…ဗွှဈပွှတျ…ပွှတျ..အား..အား..အီး…ကောငျးလိုကျတာကိုကွီးရယျ “စနျးစနျး ကိုကွီးကိုအပျေါကလုပျပေးနျော””အငျး”စနျးစနျးလဲစနအေပျေါတကျပွီး အပျေါကနထေိုငျပွီးစောငျ့တာပေါ့ဗွှတျဗွှတျ….” အား..ကောငျးတယျစနျးစနျးကောငျးတယျ” ”စနျးစနျးလဲအရမျးကောငျးနပွေီကိုကွီး” စနလေဲအောကျကနစေနျးစနျးဖငျကွီးကိုကိုငျပွီး ပငျ့ပငျ့လိုးတာပေါ့….ပွှတျ..ပွှဈ…ဗွိ…အှနျ့…အီး…အား…ဟငျ့…ဟငျ့…အား…”အား..ကောငျးတယျကှာ…” “ကိုကွီးစနျးစနျးအရမျးကောငျးလားပွီးစောဏကလိုပွီးခငျြလာပွီး… အား..အှနျ့..””စနျးစနျးလေးဘကျထောကျပေးကှာ””ဟာကိုကွီးကလဲပွီးခါနီးနတောကိုအမြိုးမြိုးပဲ” ”လုပျပါစနျးစနျးရယျကိုကွီးလဲကောငျးနပွေီ…” စနျးစနျးလဲစနပေျေါကဆငျးပွီးလေးဘကျကုနျးပေးတာပေါ့..
စနကေစနျးစနျးနောကျမှာနရောဝငျယူပွီး စနျးစနျးရဲ့စောကျဖုတျထဲကို သူလီးကွီးအတငျးထိုးထညျ့ပါလရေော… ဗြှတျ….အအား…အှနျ့…နောကျကနစေနျးစနျးရဲ့ဖငျကွီးကိုကွညျ့ပွီး စနဖေီးတှတေကျနပွေီး စနျးစနျးဖငျကွီးနှဈလုံးကိုဖွဲကိုငျပွီးစနစေောငျ့စောငျ့လိုးတော့တာပဲ… ဗွှတျ..ဗွှတျ….ဗဈြ…”အားကောငျးတယျအကို””အရမျးကောငျးတာပဲ””အကိုလဲကောငျးနပွေီစနျးစနျး”အား…အိုး….အငျ့..အငျ့..စနျးစနျးပွီးခငျြလာပါပွီ”အကိုစနျးစနျးပွီးတော့မယျအား…အ… အီး..ပွီးပွီ…ပွီတော့မယျ..အား..အငျး..””အား…ရော့ ပွီးကှားပွီးစမျး..””အိုး..အ..အကို….အငျ့..အငျ့…ဟငျး….”စနျးစနျးပွီးသှားပါတယျစနလေဲပွီးခငျြလာတော့မနားတနျးစောငျ့စောငျ့ခပြါတော့တယျ..” စနျးစနျးစောကျဖုတျကွီး..စနျးစနျးဖုတျကွီး..အား..အား..လိုးလို့ကောငျးတဲ့…စနျးစနျးစောကျဖုတျကွီး… အငျ့အငျး…ရော့..ရော့…”ပဈ..ပဈ..ဗွဈ..စနျးစနျးရဲ့စောကျဖုတျထဲကိုစနရေဲ့လရတှေထေညျ့ပွီးပွီးလိုကျတယျ…
အား…“အှနျး..အ..ကောငျးလိုကျတာအကိုရယျ..””အကိုလဲအရမျးကောငျးတယျစနျးရယျ..” ”စနျးကိုလဲအရမျးခဈြမိသှားပွီ”” စနျးစနျးလဲအကိုကိုခဈြပါတယျ” စနျးစနျးလဲအဝတျအစားတှပွေနျဝတျစနလေဲအဝတျအစားတှဝေတျပွီးရော…” စနျးစနျးရေ..စနျးစနျး..သမီးရေ…””ဟျော..ကွာနလေို့ထငျတယျအမေ့…လိုကျလာပွီ…”ဟုတျပါ့ကြှနျမမနေ့လေိုကျတာ အကိုစနနေဲ့လိုးလို့အရမျးကောငျနလေို့… မနေ့တော..”စနျးစနျးသမီးရေ…””ရှငျအမအေမီးဒီမှာ..” ”အမယျလေး..ကွာလိုကျတာသမီးရယျဘာလုပျနတောလဲအမစေိတျပူလိုကျတာ””အျော…လူလေးစနလေဲရောကျနတောလား””ဟုတျအရီးစိနျမကြုပျဒီမှာယုနျလာထောငျတာ…””ဟုတျအမေ သမီးလဲကိုကွီးစနကေိုဝိုငျးလုပျပေးနတောအဲ့တာကွောငျ့ကွာနတော…”
”အျော…အေးပါကှယျ..မငျးယုနျတောငျတာမိရဲ့လားစနရေဲ့” ”အရီးစိနျမရေ..ယုနျထောငျကွောငျမိဆိုသလိုပေါ့ယုနျထောငျတာကွောငျမိနလေို့”” ဟဲ့ဘယျမလဲကှဲ့ကွောငျက””ကွောငျကအမလေးမို့လို့လှတျပေးလိုကျပွီ” “အျော..အေးသာဓုပါကှယျသာဓုသာဓုပါ” ”မောငျစနအေရီးတို့တဲမှာညနစေ့ာထမငျးစားသှားပါလား” ”ဟုတျအရီးစိနျမ””ကဲကဲ လာလာပွနျကွဆို့”အရီးစိနျမလဲရှကေ့နထှေကျသှားတာပေါ့ နောကျကနစေနရေယျစနျးစနျးခငျရယျလိုကျလာပွီး” အကိုနျောအမကေိုဘာရှောကျပွောနတောလဲ” ”ဟောဗြာကြုပျကဘာမြားပွောမိလို့လဲ အမိရဲ့””ယုနျထောငျတာကွောငျမလေးမိတယျဆိုတာလေ ဘယျမှကွောငျမလေး”
“အျော အဲ့တာလား ကွောငျမလေးကဟော့ဒိမှာ ဒီကွောငျမလေးကိုမိတာပေါ့ ဇီးတောငျတငျပေးလိုကျသေးတယျလေ””ဟာ..ကွညျ့စမျး..သှားနျောလူဆိုးကွီးဘာတှရှေောကျပွောနတောလဲ…” စနျးစနျးလဲစနရေဲ့ကြောတှကေိုလကျသီးစုတျလေးတှနေဲ့ထုပါတော့တယျ… “ဒီညလဲ ကွောငျမလေးကိုဖမျးပွီး ဇီးတငျပေးဦးမယျနျော””ဟာအကိုကလဲ စနျးစနျးဒီမှာနာနပွေီ” ”ဘာလဲအစနျးကမခံခငျြတော့ဘူးလား.တျောတျောနာနလေို့လား” ”ဟီး….ကိုကိုသဘောကိုသဘော”ပွောပွီးလယျတဲရှိရာ ထှကျသှားပါတော့တယျ…စနျးစနျးလဲပေါငျလေးကှတကှတနဲ့စနရေဲ့လကျမောငျးတှကေိုမွှီပွီး ကြောခိုငျးသှားကွပါတော့တယျ…..End
သူမနာမည်က ‘စန်းစန်းခင်’အသက် ၁၉ ကျော်လို့ ၂၀ ပြည့်တော့မယ် တောသူဆိုတော့ လုံးကြီးပေါက်လှပေါခါးသေးရင်ချီဖင်လုံးကြီးကြီး…နို့အုံထွားထွားပေါ့…ရွာကာလသားတွေအကြိုက်ပေါ့ အမေတစ်ခုသမီးတစ်ခု..သူကတော့ ဘယ်ကာလသားမှစိတ်မဝင်စားဘူးသူသိတာက ‘စနေ’သူနာမည်ကတော့ ‘စနေ’ လို့ခေါ်ပါတယ် မိသားစုတော့မရှိတော့ဘူး အသက် ၂၅ ငယ်ငယ်ထဲကမိဘတွေဆုံးပါးသွားပြီ စနေဆိုရင်တစ်ရွာလုံးကကြောက်တယ်သူကမဟုတ်မခံလေ.. သူဟာသူတစ်ယောက်ထဲနေတယ် ဘယ်သူနဲ့မှမရောဘူး သူကိုစောက်ပြဿနာလာရှာရင်တော့ အဲ့ကောင်ဘဝကိုတော့မတွေးဝန့်စရာ သူကရွာအကြီးအကဲသူကြီးကိုတောင် သိပ်ဂရုမစိုက်ဘူး သူကြီးကလဲသူကိုသိပ်မဟုတ်ပဲနဲ့မစွတ်ဆွဲဘူးပေါ့ သူကြီးပါရှိန်ရတဲ့သူ သူအလုပ်ကတောတက်အမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးလေးပေါ့…“ကိုမဲကြီးထန်ရည်တစ်မြူချဗျာ”
ဟို..ဟို.ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ.. မိစိန်မတို့ယာတောဝိုင်းနောက်ကို ယုန်တွေစားကျက် ဆင်းလာတယ်တဲ့” “ဟ..ခဗျားစောက်ပိုမပြောနဲ့ ကျုပ်ကမုတ်ဆိုးပါ ဒေါ်စိန်မတို့ဝိုင်းနောက်မှာ ဘယ်ယုန်စားကျက်မှမရှိဘူး””ငါမင်းကိုမလိမ်ဝန့်ပါဘူးကွာ ဟိုတလောကမှ ယုန်စားကျက်ဆင်းလာတာကွ” ”ငါ့ကို မိစိန်မ သမီး စန်းစန်းခင် လာပြောတာကွ””ငါ့ကိုယုန်ထောက်ချောက်လုပ်တက်လားတဲ့ ငါလဲမလုပ်တက်ဘူးဆိုတော့အဲ့တာကိုကြီးစနေလာရင်ပြောလိုက်ပါတဲ့ယုန်စားကျက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုရရင်တော့ သူတို့ကိုလဲဟင်းစားနဲနဲလောက်ပေးခဲ့ပေါ့တဲ့” “အေးပြီးရောဗျာကျုပ်အခုအဲ့ဘက်ကလှဲ့ပြန်မယ် ”ပြောပြီးစနေ့လဲလှဲ့ထွက်သွားတယ် မဲကြီးတစ်ယောက်စနေနောက်ကျောကိုကြည့်ပြီး” ဟူးဒီကောင်နဲ့စကားပြောရတာလဲ မြို့ပိုင်မင်းနဲ့စကားပြောရတာထက်ကိုပိုဆိုးတယ်”ဟဲ့ စန်းစန်း””ရှန်..အမေ””သမီးသောက်ရေလေးသွားခက်ပြီး ယာထဲကဇွန်းနဲနဲခူးခဲ့ပါကွယ်…
ညနေ့စာအတွက်ဟင်းချက်ရအောင်””ဟုတ်အမေ သမီးအခုပဲသွားလိုက်ပါမယ်”ပြောလဲပြောစန်းစန်းခင်လဲသောက်ရေပုံးဆွဲပြီးယာထဲဆင်းပေါ့… စန်းစန်းခင်တို့ယာအနောက်မှာက ပဲခင်းကဇွန်းနဲ့မုန်လာခင်းနဲ့သီးပင်စားပင်တွေအစုံရှိတယ် အနားမှာလဲ ရေကန်ငယ်လေးတစ်ကန်ရှိတော့ သူတို့သားမိတွေအဆင်ပြေတာပေါ့ သူတို့သားမိနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်မနှစ်ကမှဖခင်ကြီးပိုးထိလို့ဆုံးသွားတော့သီးပင်စားပင်သီးချိန်ပွင့်ချိန်ရောက်ပြီဆို သားမိနှစ်ယောက်ယာထဲဆင်းနေရတာပေါ့ ရွာထဲမှာတော့အိမ်တစ်လုံးရှိပါတယ်. .“အင်း..ဒီအတိုင်းဆိုသေချာနေပြီ.. ဒီယာတောကိုယုန်တွေစားကျက်ကြနေပြီပဲ”စနေတစ်ယောက် အနေအထားကြည်ပြီးထောင်ခြောက်တွေဆင်နေလေရဲ့…”အင်းရေတော့ခပ်ပြီးပြီ …ရေပုံးကိုဒီမှာထားခဲ့ရမယ်ကဇွန်းခူးပြီးမှာအပြန်ဝင်သယ်ရမယ်” စန်းစန်းခင်တစ်ယောက်ကဇွန်းခင်းထဲကိုထွက်လာခဲ့တယ်ကဇွန်းခူးနေရင်းနဲ့” အားအပေါ့သွားချင်လိုက်တာ”စန်းစန်းခင်လဲကဇွန်းခင်းနဲ့လွတ်တဲ့တောစပ်နားသွားပြီး အပေါ့အပါးသွားတာပေါ့ “ချွပ်..ချွပ်””ဟော..အသံကြားတယ်”စနေတစ်ယောက်လဲ အနီးရှိခြုံစပ်မှာဝင်ပုန်းလိုက်တယ် သူအထင်ယုန်တွေဆင်းလာပြီပေါ့…အသံလာရကြည့်လိုက်တော့စန်းစန်းမ ဖြစ်နေတယ်
စနေလဲခြုံစပ်ကထွက်မယ်အလုပ်”ဟာ..”စနေမျက်လုံးပြူးသွားတယ် ထရည်သောက်ပြီးရီဝေဝေဖြစ်နေတာပါပြေသွားတယ်…စန်းစန်းတစ်ယောက်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုပြီး ထမိန်အသာမပြီး သေးထိုင်ပေါက်ပြီပေါ့..”ရှဲ..ရှဲ..”စနေကြည့်နေရင်အာခေါင်တွေခြောက်လာတယ် စန်းစန်းခင်စောက်ဖုတ်ကပန်းရောင်သန်းပြီအမွှေးလေးတွေနဲ့စောက်ဖုတ်ကြားကထွက်လာတဲ့သေးကလဲ မိုးရွာလိုရေဇလောက်ကကြလာတဲ့ရေလားမှတ်ရတယ်…စနေလဲပုထုဇဉ်လူသားပဲ ကြည့်နေရင်းက အောက်ကငယ်ပါကထောင်လာတယ်.. စန်းစန်းခင်လဲအပေါ့အပါးသွားပြီးပြန်သွားတယ်.. စနေတစ်ယောက်ကတော့နေရာမှာပင်မှင်သက်ပြီးကျန်ခဲ့တယ်…စနေလဲခဏနေတော့ထောင်ချောက်တွေဆင်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်…စန်းစန်းခင်လဲ ကဇွန်းလိုသလောက်ခူးပြီးပြန်မယ်အလုပ်”ဟင်ကိုကြီးစနေပါလား..ကိုကြီးစနေဘယ်ကရောက်လာတာလဲ..” ”အေး..ငါ.ငါ..ဟိုနင်တို့ယာတောမှာယုန်ဆင်းတယ်ဆိုလို့ ထောင်ခြောက်လာဆင်တာ…””ဒါနဲ့နင်ကရောမပြန်သေးဘူးလား..””ရှန်…ကဇွန်းခူးနေတာ အခုပြန်မလို့”စန်းစန်းတစ်ယောက်ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ်…
“ဘာလို့မပြန်သေးဘူးလားမေးတာလဲစန်းစန်းရောက်နေတာကိုကြီးစနေသိတယ်ပေါ့””ဟို..ဟို မသိပါဘူး..ငါ.ဒီအတိုင်းမေးကြည့်တာ””ကိုကြီးစနေယုန်ထောက်ချောက်ဆင်နေတာ ဘယ်အချိန်ထဲကလဲ””တော်တော်ကြာပြီဟ”ဟာသွားပြီဒီပါးစပ်ကလဲလွှတ်ကနဲထွက်သွားတယ်”ရှန်.အဲ့..အဲ့…ဒါဆိုစောစောကစန်းစန်းအပေါ့သွားတုန်းကကိုကြီးစနေအဲ့နားမှာရှိတယ်ပေါ့.. ဘာလို့စန်းစန်းလာတာကိုကိုကြီးရှိတာမပြောလဲ”…. ”ငါလဲအသံကြားတော့ယုန်တွေဆင်းလာတယ်ထင်လို့..ခြုံခိုပုန်းလိုက်တာပါ…” “ပြီးမှနင်မှန်းသိတော့ငါပြန်ထွက်မလို့ပဲ..ဟို..ဟို..နင်ကအပေါ့တောင်သွားနေပြီ” စန်းစန်းတစ်ယောက်မျက်နာတွေနီနေပြီငါမှားတာပါ.. ဘယ်သူမှမရှိဘူးအထင်နဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်အပေါ့သွားလိုက်တာဆီးကလဲတော့တော့အောင့်နေတာ.. ဒါ..ဒါဆိုကိုကြီးစနေငါ့ဟိုဟာကိုမြင်သွားပြီးပေါ့..တွေးနေရင်းနဲ့ပဲစန်းစန်းပိပိလေးကကျင်ကနဲ့ဖြစ်သွားတယ်… ”အောင်မလေး..ရှက်လိုက်တာ”ပြောပြီးစန်းစန်းမျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးလှဲ့အထွက် ခြေခေါက်ပြီလဲမလို့ဖြစ်သွားတယ်..
“အ..””ဟာ..စန်းစန်း””ဟယ်…”စနေလဲစန်းစန်းလဲမလို့ဖြစ်တော့လှမ်းဖမ်းပြီထိန်းလိုက်တာပေါ့ နှစ်ယောက်လုံးမြေပေါ်လဲကြသွားတယ်စနေကအောက်ကစန်းစန်းကစနေအပေါ်ကပေါ့ …နှစ်ယောက်သားတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ငေးကြည့်နေကြတယ်…ကျွန်မရင်တွေခုန်လိုက်ဘယ်လိုဖြစ်နေပါလေ့..”အို… ”စနေစန်းစန်းကိုဆွဲလှဲ့ပြီးအပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ စန်းစန်းရဲ့ပါးတွေနမ်းနှတ်ခမ်းကိုအတင်းဖိနမ်းတာပေါ့..” ဟွန်းအွန့်..အွန့်…”စန်းစန်းအောက်နေခေါင်းတွေခါရမ်းနေတယ်… “စန်းစန်းငါစိတ်တွေထိမ်းမရတော့ဘူးဟာငါ..ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ဟာ..”ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်စိတ်တွေထိမ်းမရတော့ဘူး လဲကြသွားပြီးသူကျုပ်အပေါ်ရောက်သွားထဲက ကျုပ်မနေနိုင်တော့ဘူးလီးကလဲတော်တော်တောင်နေပြီ စန်းစန်းသေးပေါက်တုန်းကလဲကျုပ်မြင်ခဲ့တာ အခုကျုပ်အပေါ်ကိုရောက်နေပြီ ကျုပ်စိတ်တွေဘယ်ထိန်းနိုင်တော့မှာလဲ… ကျွန်မလေဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး ကိုကြီးစနေကိုလဲကျွန်မစိတ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေတာကြာပါပြီ ကိုကြီးစနေက အေးတိအေးစပ်ကြီးနဲ့မိန်းမတွေနဲ့သိပ်အရောဝင်တာမဟုတ်ဘူး အခုကျွန်မကိုနမ်းနေတာတွေ ကျွန်မဘယ်နေနိုင်မှာလဲကျွန်မလဲယောက်ျားတစ်ယောက်အထိတွေဒါပထမဦးဆုံးပဲလေ…”
ဟင်း…အ..အိုး…မလုပ်ပါနဲ့ကိုကြီးစနေရယ်”ကျွန်မစဉ်းစားနေတုန်းမှာပဲ ကိုကြီးစနေကျွန်မနို့တွေကိုင်နေပြီလေ..“စန်းစန်း ငါနင်ကိုချစ်တယ်ဟာ””ရှန်…တကယ်ချစ်တာရောဟုတ်ရဲ့လားကိုကြီးစနေရယ်””တကယ်ပါစန်းစန်းရယ်” စန်းစန်းရဲနို့တွေကိုသူပြန်ညှစ်နေပြီ”အွန်..ပြွတ်ပြွတ်…”နှတ်ခမ်းတွေကိုလဲအတင်းစုတ်ပေါ့…အိုး..သူလီးကြီးက ကျွန်မစောက်ဖုတ်လေးကိုထောက်မိနေပြီရှင့် ကျွန်မဘယ်လိုနေနိုင်မှာလဲစနေလဲလီးနဲ့စန်းစန်းရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုထောက်ပြီး အပေါ်ကနေတေ့တေ့ပြီးထိုးနေလေရဲ့.. လက်တွေကလဲအညိမ်မနေဘူး. .နို့တွေညှစ်လိုက်အောက်ကိုအတင်ထိုးပြီးဖင်တွေကိုညှစ်လိုက်ပေါ့ စန်းစန်းတစ်ယောက်အောက်ကနေ့ကော့ပြန်နေပါပြီ…စနေစန်းစန်းရဲ့အင်္ကျီလေးကိုချွတ်ချလိုက်ပါပြီ ပြီးတော့စန်းစန်းရဲ့စီမီးဘော်လီအင်္ကျီလေးကိုချွတ်အပြီး…ဟာလှလိုက်တာ စန်းစန်းရဲ့နို့အုန်ကြီးကိုမြင်ပြီ စနေ မနေနိုင်တော့ဘူးအတင်းကုန်းစို့တော့တာပေါ့…”အို…ကိုကြီးစနေ့အား..အီး..” စန်းစန်းဖီးတွေစွတ်တက်နေပါပြီ စနေရဲ့ခေါင်းတွေကိုအတင်းပြန်ပြီးသိုင်းဖက်ထားပါတော့တယ်… စနေခေါင်းပြန်မော့လာပြီး စန်းစန်းရဲ့နှတ်ခမ်းကိုတစ်ချက်လှမ်းစုတ်လိုက်တယ်စန်းစန်းလဲအလိုက်သင့်ပြန်စုတ်ပေးတာပေါ့ …နှတ်ခမ်းစုတ်နေရာကစနေပြန်ခွာလိုက်တယ်
စန်းစန်းကစနေကိုမျက်လုံးလေကလယ်ကလယ်နဲ့ပြန်ကြည့်နေတာပေါ့…စနေကသူအင်္ကျီတွေချွတ်လိုက်ပါတယ်..ပြီးတော့သူဘောင်ဘီတွေချွတ်မယ်လုပ်တော့…စန်းစန်းကစနေရဲ့လက်ကိုလှန်းကိုင်ပြီး”ကိုကြီးစန်းစန်းကိုတကယ်ရောချစ်ရဲ့လား””စန်းစန်းက အကို့ကိုယ်မယုံလို့လား.. ကိုယ်.. စန်းစန်းကိုတကယ်ချစ်မိသွားတာပါ”ပြောပြီးစနေ စန်းစန်းရဲ့နှတ်ခမ်းတွေကိုပြန်စုတ်နို့သီးတွေစို့ပေါ့”အား…ကိုကြီး..စန်းစန်းမနေတက်တော့ဘူး… အ…အ..စန်းစန်းလဲကိုကြီးကိုအရမ်းချစ်တယ်..အာ့..”စနေလဲစန်းစန်းရဲ့နိုတွေစို့နေရာမှ ထမိန်ကိုအသာလေးအောက်ကိုချွတ်ချတာပေါ့…စန်းစန်းလဲဖင်လေးကိုအလိုက်သင့်လေးမြှက်ေပေးလိုက်တယ်…စန်းစန်းထမိန်ကွင်းလုံးချွတ်ကြသွားပါပြီ..စနေ စန်းစန်းရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကိုကြည့်နေရာမှ တသွေးတွေမျိုချလိုက်ရတယ်”ဂလု” “အာ…လှလိုက်တာစန်းစန်းရာ.. စန်းစန်းရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကအရမ်းလှတာပဲ” ”အာ..လူကြီးနော်ဘာတွေပြောနေတာလဲ” စန်းစန်းမှာနွဲ့တဲ့တဲ့အသံလေးနဲ့ပြန်ဆိုလိုက်တယ် …ပြောသာပြောရတယ် သူအဲ့လိုပြောတော့စန်းစန်းစောက်ဖုတ်လေးကျင်ကနဲဖြစ်ပြီး အရေလေးတွေတောင်စိမ့်ထွက်လာတယ်
“အို..ကိုကြီး..အား..ရွှီး…အ..အ.” “ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲကိုကြီးရယ်..အား.. ”စနေမှာစန်းစန်းရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကိုကုန်းပြီးစုတ်နေတာပေါ့ စန်းစန်းအောက်ကနေမနေနိုင်တော့ဘူးလေဖင်တွေဆိုကော့ပြန်လန့်ထွက်နေပြီ…”အား…စန်းစန်းကိုသက်နေတာလားကိုယ်ကြီးရယ်…” “ချစ်နေတာပါ..စန်းစန်းရဲ့ ကိုကြီးကစန်းစန်းကိုအချစ်တွေပေးနေတာ” ပြွတ်…ပြွတ်… ရွှတ်….စောက်စိလေကိုဆွဲစုတ်လိုက်တာပေါ့ရှာလွတ်…”အား…အို….စန်းစန်းမနေနိုင်တော့ဘူးကိုကြီးအား….” ပြွတ်…ပြွတ်….”အာ..အ..အို…ကိုကြီး.အား…”စန်းစန်းပြီးချင်နေပြီလေ စနေခေါင်းကိုအတင်းဖိကိုင်ထားတာပေါ့အ…အား..ငိ…အိုး…ဟင်း…စန်းစန်းပြီးသွားပြီ အိုအရမ်းကောင်းလိုက်တာ ဘာနဲ့မှကိုမလဲနိုင်တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပဲစန်းစန်း ကောင်းလွန်းအားကြီးလို့ မျက်လုံးလေးမှေးပြီးမျက်ရည်လေးတွေပါကျနေမိတယ်…
စနေလဲသူဘောင်ဘီကိုချွတ်နေရင်းနဲ့.. “ကောင်းလားစန်းစန်း””အင်း…ကိုကြီးကိုစန်းစန်းအရမ်းချစ်တယ်” စန်းစန်းပြန်ပြောရင်းနဲ့မျက်စိလေးအသာဖွင့်ကြည့်တော့ အို့…သူလီးကြီးက အကျောတွေထောင်လို့လီးကြီးကတန်းနေတယ်စန်းစန်းကြည့်ပြီးကျက်သီးတွေထကုန်တယ်…စနေကစန်းစန်းရဲ့နှတ်ခမ်းလေးတွေကိုပြန်စုတ်ပြီး ပြောတယ်”စန်းစန်းကိုကြီးကိုရော ကောင်းအောင်မလုပ်ပေးချင်ဘူးလား…” ”စန်းစန်း ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ..” “စန်းစန်းကို ကိုကြီးလုပ်ပေးသလို့ပေါ့ ဒါကြီးကို ဒါလေးနဲ့လေ..”ပြောပြီးစနေ့ကသူလီးကိုပြပါတယ်ပြီးတော့ စန်းစန်းရဲ့ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ထောက်ပြတယ်စန်းစန်းသိတာပေါ့ဒါသူစန်းစန်းကိုလီးစုပ်ခိုင်းတာပဲ.. စန်းစန်းတွေဝေသွားတယ် လီးစုပ်ရမှာစန်းစန်းတစ်ခါမှဒါမျိုးမလုပ်ဖူးဘူး ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတွေအကြုံကလဲဒါပထမဆုံးလေ…
စန်းစန်းအာခေါင်တွေခြောက်ကပ်လာတယ်..စုပ်လဲစုပ်ကြည့်ချင်တယ် စုပ်လဲမစုပ်ရဲဘူး.. “စန်းစန်း…ဘာဖြစ်လို့လဲ မလုပ်ပေးချင်ဘူးလား ဘာလဲကိုကြီးကိုမချစ်လို့လား..””မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးရယ် ကိုကြီးကိုမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူး..””အင်း..စန်းစန်းမလုပ်ပေးချင်လဲကိုကြီး အတင်းမလုပ်ခိုင်းပါဘူး… ”ပြောပြီးစန်းစန်းရဲ့နို့တွေစို့လိုက်တယ် လက်ကလဲစန်းစန်းရဲစောက်ဖုတ်ကိုနှိုက်ပြီး စောက်စိလေးကိုချေပေးနေတာပေါ့ အိုး…စန်းစန်းစောက်ပတ်ကပြန်ယားလာပြန်ပြီ တစ်ကိုယ်လုံးကျက်သီးတွေထသွားတယ် ကိုကြီးကိုလဲသနားသွားတယ် စန်းစန်းကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာပဲ စန်းစန်းလဲကိုကြီးကိုပြန်လုပ်ပေးသင့်တာပေါ့ စန်းစန်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ… စန်းစန်း စနေရဲ့ခါးကိုကိုင်ပြီးပတ်လက်ပြန်လှန်လိုက်တယ် ပြီးတော့စနေရဲ့ပေါင်ဂွကြားကိုသွားပြီး”စန်းစန်း ကိုကြီးကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်နော်””စန်းစန်းကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လိမ်လဲလိမ်မာသိလား”
”အွန်း..သွားပါအပိုတွေ”စန်းစန်း ကနွဲ့ကလဲ့ရအသံလေးနဲ့ညူညူတူတူပြောလိုက်တယ်စန်းစန်း စနေရဲ့လီးကိုကိုင်လိုက်တယ် ပြီးတော့စန်းစန်းပါးစပ်လေးအသာဟပြီး စနေကိုလီးစုပ်ပေးတော့တာပေါ့….“အား…ကောင်းလိုက်တာစန်းစန်းရယ်”ပြွတ်ပြွတ်.. အား…တော်တော်လေးကြာတော့”တော်တော့စန်းစန်းတော်တော့””ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီး စန်းစန်လုပ်ပေးတာမကောင်းလို့လား””စန်းစန်းလုပ်ပေးတာကောင်းပါတယ်ကိုကြီး စန်းစန်းရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုလိုးချင်လို့””ဟာကိုကြီးကလဲ အဲ့လိုတွေမပြောပါနဲ့””ဘာလို့လဲစန်းစန်းရဲ့” “ရှက်စရာကြီး””ဘယ်သူမှမရှိတာ မရှက်ပါနဲ့နော်” “သွားမသိဘူး သူကြိုက်သလိုပြော ကြိုက်သလိုလုပ်တော့” စန်းစန်းလဲကြာကြာမမူနိုင်ပါဘူး
အဲ့လိုတွေပြောလေစန်းစန်းဖီးတွေတက်လေပဲလေ…”စန်းစန်းပတ်လက်လှန့်လိုက်နော်” “အင်း”စနေလဲစန်းစန်းရဲပေါင်းနှစ်လုံးကြားဝင်ပြီး စန်းစန်းရဲ့စောက်စိကို လီးထိပ်နဲ့ထိုးချေတာပေါ့ “အား..ကောင်းလိုက်တာကိုကြီးရယ်” စန်းစန်းဖီးတွေပြန်တက်လာပါပြီ စနေကလဲလီးထိပ်နဲ့စောက်စိကိုထိုးချေလိုက်လက်ကလဲနိုးသီးတွေကိုညှစ်ပြီနယ်ပေးနေတာပေါ့ စန်းစန်းကော့လန့်လာပါပြီ စန်းစန်းမနေနိုင်တော့ဘူး စနေသိပါတယ် စန်းစန်းခံချင်လာပြီဆိုတာ”စန်းစန်း ကိုကြီး စန်းစန်းကိုလိုးတော့မယ်နော်””အင်း..ဖြေးဖြေးလုပ်နော်ကိုကြီး””အင်းပါ..စန်းစန်းစိတ်တွေရှော့ထား တင်းမထားနဲ့”ပြောပြီးစနေသူလီးကိုအရင်းကနေကိုင်ပြီး စန်းစန်းစောက်ပတ်ထဲကို ထိုးစိုက်လိုက်တာပေါ့ “ဗြိ…ဗြွတ်…”
”အား….အာမလေး…အိ..အမေ့””အားနာတယ်ကိုကြီး””ခဏလောက်အောင့်ခံပါစန်းစန်းရယ်” စနေလဲလီးကိုကိုင်ပြီးစန်းစန်းရဲစောက်ပတ်ထဲကိုသေသေချာချာထည့်တာလီးကတစ်ဝက်ကျော်လောက်စန်းစန်းရဲ စောက်ပတ်ထဲကိုဝင်နေပြီ…“အား..အီး…”စနေလဲတစ်ဝက်လောက်ဝင်နေတဲ့အတိုင်းလေးလိုးနေတာပေါ့…” အိုး..ကောင်းလိုက်စန်းစန်းရယ်””အား..အိ…အ..”ပြွတ်..ပြွတ်…လိုးရင်းလိုးရင်းနဲ့ လီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်နေတာပေါ့…”အား…ကောင်းတယ်ကိုကြီး”ဗြိ…ဗြစ်…အား…နာတယ်စနေလဲလီးကိုတစ်ဆုံးထိုးထည့်လိုက်တယ်…
စန်းစန်းရဲ့နှတ်ခမ်းတွေစုပ်နို့တွေညှစ်ပြီးလိုးပေးနေတာပေါ့…” အား…ကောင်းလိုက်တာ” ”စန်းစန်းကောင်းလားလိုးလို့ကောင်းလား””အား…ရွှီး..ကောင်းတယ်ကိုကြီး..နဲနဲနာတယ်””စန်းစန်းခံနိုင်လား” ”အင်းရတယ်ကိုကြီးလိုးလိုးစန်းစန်းအောင့်ခံပေးမယ်”အား….အွန့်…အွန့်…ပွတ်…ပွတ်…ဗြိ..ဗြိ..ပလွတ်…ဗြွစ်ပြွတ်…ပြွတ်..အား..အား..အီး…ကောင်းလိုက်တာကိုကြီးရယ် “စန်းစန်း ကိုကြီးကိုအပေါ်ကလုပ်ပေးနော်””အင်း”စန်းစန်းလဲစနေအပေါ်တက်ပြီး အပေါ်ကနေထိုင်ပြီးစောင့်တာပေါ့ဗြွတ်ဗြွတ်….” အား..ကောင်းတယ်စန်းစန်းကောင်းတယ်” ”စန်းစန်းလဲအရမ်းကောင်းနေပြီကိုကြီး” စနေလဲအောက်ကနေစန်းစန်းဖင်ကြီးကိုကိုင်ပြီး ပင့်ပင့်လိုးတာပေါ့….ပြွတ်..ပြွစ်…ဗြိ…အွန့်…အီး…အား…ဟင့်…ဟင့်…အား…”အား..ကောင်းတယ်ကွာ…” “ကိုကြီးစန်းစန်းအရမ်းကောင်းလားပြီးစောဏကလိုပြီးချင်လာပြီး… အား..အွန့်..””စန်းစန်းလေးဘက်ထောက်ပေးကွာ””ဟာကိုကြီးကလဲပြီးခါနီးနေတာကိုအမျိုးမျိုးပဲ” ”လုပ်ပါစန်းစန်းရယ်ကိုကြီးလဲကောင်းနေပြီ…” စန်းစန်းလဲစနေပေါ်ကဆင်းပြီးလေးဘက်ကုန်းပေးတာပေါ့..
စနေကစန်းစန်းနောက်မှာနေရာဝင်ယူပြီး စန်းစန်းရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို သူလီးကြီးအတင်းထိုးထည့်ပါလေရော… ဗျွတ်….အအား…အွန့်…နောက်ကနေစန်းစန်းရဲ့ဖင်ကြီးကိုကြည့်ပြီး စနေဖီးတွေတက်နေပြီး စန်းစန်းဖင်ကြီးနှစ်လုံးကိုဖြဲကိုင်ပြီးစနေစောင့်စောင့်လိုးတော့တာပဲ… ဗြွတ်..ဗြွတ်….ဗျစ်…”အားကောင်းတယ်အကို””အရမ်းကောင်းတာပဲ””အကိုလဲကောင်းနေပြီစန်းစန်း”အား…အိုး….အင့်..အင့်..စန်းစန်းပြီးချင်လာပါပြီ”အကိုစန်းစန်းပြီးတော့မယ်အား…အ… အီး..ပြီးပြီ…ပြီတော့မယ်..အား..အင်း..””အား…ရော့ ပြီးကွားပြီးစမ်း..””အိုး..အ..အကို….အင့်..အင့်…ဟင်း….”စန်းစန်းပြီးသွားပါတယ်စနေလဲပြီးချင်လာတော့မနားတန်းစောင့်စောင့်ချပါတော့တယ်..” စန်းစန်းစောက်ဖုတ်ကြီး..စန်းစန်းဖုတ်ကြီး..အား..အား..လိုးလို့ကောင်းတဲ့…စန်းစန်းစောက်ဖုတ်ကြီး… အင့်အင်း…ရော့..ရော့…”ပစ်..ပစ်..ဗြစ်..စန်းစန်းရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကိုစနေရဲ့လရေတွေထည့်ပြီးပြီးလိုက်တယ်…
အား…“အွန်း..အ..ကောင်းလိုက်တာအကိုရယ်..””အကိုလဲအရမ်းကောင်းတယ်စန်းရယ်..” ”စန်းကိုလဲအရမ်းချစ်မိသွားပြီ”” စန်းစန်းလဲအကိုကိုချစ်ပါတယ်” စန်းစန်းလဲအဝတ်အစားတွေပြန်ဝတ်စနေလဲအဝတ်အစားတွေဝတ်ပြီးရော…” စန်းစန်းရေ..စန်းစန်း..သမီးရေ…””ဟော်..ကြာနေလို့ထင်တယ်အမေ့…လိုက်လာပြီ…”ဟုတ်ပါ့ကျွန်မမေ့နေလိုက်တာ အကိုစနေနဲ့လိုးလို့အရမ်းကောင်နေလို့… မေ့နေတာ..”စန်းစန်းသမီးရေ…””ရှင်အမေအမီးဒီမှာ..” ”အမယ်လေး..ကြာလိုက်တာသမီးရယ်ဘာလုပ်နေတာလဲအမေစိတ်ပူလိုက်တာ””အော်…လူလေးစနေလဲရောက်နေတာလား””ဟုတ်အရီးစိန်မကျုပ်ဒီမှာယုန်လာထောင်တာ…””ဟုတ်အမေ သမီးလဲကိုကြီးစနေကိုဝိုင်းလုပ်ပေးနေတာအဲ့တာကြောင့်ကြာနေတာ…”
”အော်…အေးပါကွယ်..မင်းယုန်တောင်တာမိရဲ့လားစနေရဲ့” ”အရီးစိန်မရေ..ယုန်ထောင်ကြောင်မိဆိုသလိုပေါ့ယုန်ထောင်တာကြောင်မိနေလို့”” ဟဲ့ဘယ်မလဲကွဲ့ကြောင်က””ကြောင်ကအမလေးမို့လို့လွှတ်ပေးလိုက်ပြီ” “အော်..အေးသာဓုပါကွယ်သာဓုသာဓုပါ” ”မောင်စနေအရီးတို့တဲမှာညနေ့စာထမင်းစားသွားပါလား” ”ဟုတ်အရီးစိန်မ””ကဲကဲ လာလာပြန်ကြဆို့”အရီးစိန်မလဲရှေ့ကနေထွက်သွားတာပေါ့ နောက်ကနေစနေရယ်စန်းစန်းခင်ရယ်လိုက်လာပြီး” အကိုနော်အမေကိုဘာရှောက်ပြောနေတာလဲ” ”ဟောဗျာကျုပ်ကဘာများပြောမိလို့လဲ အမိရဲ့””ယုန်ထောင်တာကြောင်မလေးမိတယ်ဆိုတာလေ ဘယ်မှကြောင်မလေး”
“အော် အဲ့တာလား ကြောင်မလေးကဟော့ဒိမှာ ဒီကြောင်မလေးကိုမိတာပေါ့ ဇီးတောင်တင်ပေးလိုက်သေးတယ်လေ””ဟာ..ကြည့်စမ်း..သွားနော်လူဆိုးကြီးဘာတွေရှောက်ပြောနေတာလဲ…” စန်းစန်းလဲစနေရဲ့ကျောတွေကိုလက်သီးစုတ်လေးတွေနဲ့ထုပါတော့တယ်… “ဒီညလဲ ကြောင်မလေးကိုဖမ်းပြီး ဇီးတင်ပေးဦးမယ်နော်””ဟာအကိုကလဲ စန်းစန်းဒီမှာနာနေပြီ” ”ဘာလဲအစန်းကမခံချင်တော့ဘူးလား.တော်တော်နာနေလို့လား” ”ဟီး….ကိုကိုသဘောကိုသဘော”ပြောပြီးလယ်တဲရှိရာ ထွက်သွားပါတော့တယ်…စန်းစန်းလဲပေါင်လေးကွတကွတနဲ့စနေရဲ့လက်မောင်းတွေကိုမြှီပြီး ကျောခိုင်းသွားကြပါတော့တယ်…..End
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကိုကို့သဘော